Banaanbixii ugu weyn ee looga soo horjeedo Jubbaland oo ka dhacay Baardheere – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
26th August 2018 Ardaan Yare Af Soomaali 0
Waxaa maanta Magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo ka dhacay Banaanbax xoogan oo dhigayeen boqolaal shacab oo isaga kala yimid duleedka Magaalada iyo deegaanada ku dhow dhow.
Banaanbaxayaasha oo isugu soo baxay Gudaha Baardheere ayaa waxa ay ku qeylinayeen Erayo ay uga soo horjeedaan Maamulka Jubbaland,iyagoo sheegay in ay aad u dhaliilsan yihiin siyaasada Madaxda Maamulka Jubbaland.
Sidoo kale Banaanbaxayaasha ayaa waxa ay Gudaha degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ku gubeen Taayaro,iyaga oo ku dhawaaqayay Erayo ay ka mid yihiin Maamulka Jubbaland doonimeyno iyo Eryayo kale oo ka dhan ah Maamulka Jubaland.
Saddexdii maalin ee la soo dhaafay ayaa waxaa Gobolada Jubbada Hoose iyo Gedo ka dhacay banaanbaxyo rabshado watay,kuwaasi oo looga soo horjeeday Jubbaland,waxaana hada socda abaabul ka dhan ah Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam,iyada oo ilaa iyo hada madaxda ugu sareysa Jubbaland ka hadlin banaanbaxyadaas.
Dab xoogan oo ka kacay Maqaayad ku taalla agagaarka Isbitaalka Digfeer